‘प्रिय सुफी’ लेख्दाका खुसी र सास्ती | Subin Bhattarai
तर म यहाँ मेरो पछिल्लो उपन्यास प्रिय सुफी का बारेमा चर्चा गर्न आएको छु । कसरी लेखियो प्रिय सुफी ? किन लेखियो ? लेख्दाका केही अनुभवहरु बाँड्न चाहन्छु ।
कथाकी पात्र, समर लभ, साया र मनसुन गरेर चारवटा किताब छापिसकेपछि अब पालो नयाँ किताबको थियो । कथाकी पात्र छाडेर बाँकीका तीनवटै किताब मा मैले एउटा केटा र केटीको प्रेमलाई महत्व दिएँ । कथाकी पात्रले लेखन क्षेत्रमा पहिलो पाइला टेक्न सघायो । समर लभ ले मलाई मेरा प्रिय पाठकहरुसामु चिनायो । सायाले सफलताको केही खुड्किला पक्कै चढायो । मनसुन ले त्यही सफलतालाई पिठ्यूँमा बोकेर थेगिदियो । तर म सन्तुष्ट हुन सकिरहेको थिइँन । मान्छे पूर्ण सन्तुष्ट त कहिले पो हुन सकेको छ र ? मेरो असन्तुष्टि कथाको विषयलाई लिएर थियो । प्रेम त लेखेँ तर योपटक अलिक भिन्न प्रेम लेख्न मन लागिरहेको थियो ।
केही प्रेरणादायी कुरा लेख्ने मन भइरहेको थियो । तर दिमागमा केही कथा थिएन ।
एकदिन घुम्दै फिर्दै जाँदा श्रीमतिलाई सोधेको थिएँ, ‘के पो लेख्ने होला योपटक ?’ ऊनले भनेकी थिइन्, ‘त्यो तीन वर्ष अघि कान्तिपुरको कोसेलीमा छापिएको संस्मरणलाई कथामा उतार्दा के होला ?’